Fanoherana · Desambra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Desambra, 2019
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Desambra, 2019
Voaheloka ireo atidoha tao ambadiky ny vono olona tany Ampatuan saingy mbola mitohy ny ady amin'ny tsimatimanota ao Filipina
Azia Atsinanana 26 Desambra 2019
Nanome hery anay, nanamafy ny fahabetsahanay ny folo taona farany. Taorian'ny famonoana, dia mbola nitohy ny famonoana mpanoratra gazety. Dimy ambin'ny folo tamin'ireo mpiara-miasa aminay no voatifitra teo ambanin'ity fitantanam-panjakana ity.
Ny tanànan'i Siberie mikasa ny hifidy saka ho ben'ny tanàna
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Desambra 2019
Manalavitra azy ireo ny politika monisipaly, nanomboka nanome marika tsy fahafaliana amin'izay ireo olom-pirenena tsotra Saka iray tohanan'ireo mpanao aterineto ny firotsahany ho kandidà ho ben'ny tanàna.
Ho an'ireo vehivavy tiorka mitolona tsy hianjadian'ny herisetra, toy izao no navalin'ny filohampireneny : Atsaharo ny fitakiana fitoviana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Desambra 2019
2014, taona iray nampivarahontsana raha resaka herivetra manjo ny vehivavy tao Tiorkia. Tsy tsara araka izany ny nandraisana ilay 'fifanahantsahànana' naroson'ny filoha Erdoğan.
Amerika Latina 16 Desambra 2019
Azia Atsinanana 12 Desambra 2019